SAWIRO : Madaxweynaha Soomaaliya iyo Kulankii dhigiisa Dalka Sudan.
Home»Somali News»SAWIRO : Madaxweynaha Soomaaliya iyo Kulankii dhigiisa Dalka Sudan.
Facebook	Twitter	Thursday, January 03 2013	SAWIRO : Madaxweynaha Soomaaliya iyo Kulankii dhigiisa Dalka Sudan.	Written by Admin
Add comment	Khartuum ( SPR ) : Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo socdaal ku jooga dalka Sudan ayaa waxaa uu kulan kula qaatay Khartuum Madaxweynaha dalka Sudan Cumar Xasan Al bashiir iyo Golihiisa Wasiirada kadib casuumaad gaar ah oo ay u sameeyeen Madaxweynaha.
Madaxweyne Xassan Sh. Maxamuud oo maal mihii aynu soo dhaafnay ku sugnaa dalkaasi ayaa Madaxweynaha iyo shacabka Sudan waxaa uu ku amaanay horumarka ay sameeyeen,isagoona ka mahadceliyay taageerada ay Sudan siiso Soomaaliya,gaar ahaana dhanka Waxbarashada.
Madaxweyne Xasan Sheekh Waxaa uu ka qayb galay furitaankii biyo xireenka Damazin ee ku yaala gobolka Blue Nile.
Madaxweyne Xasan Sheekh waxaa uu la kulmay arday Soomaaliyeed ee jaamacadaha ka dhigta dalka Sudan, Wuxaana uu u sheegay in ay ka faa iideystaan fursada ay heystaan,Soomaaliyana ay iyaga sugeyso loogana fadhiyo in ay dalka dib ugu soo laabtaan iyaga oo u faa iideynaya shacabkooda.
Dalka Qadar oo ugu baaqay caalamka taageerida Soomaaliya xili Madaxweyne Xasan uu ku sugan yahay dalkaasi.
« Wasiirka Amniga Puntland oo Fariin digniin ah u diray Alshabab.	Wasiirada Arimaha Dibada Soomaaliya iyo Ingiriiska oo ka wada hadlay Xaalada Soomaaliya. »
Kaluumaysatada Iiraaniga ah ee ay Xukuntay Maxkamada Boosaaso oo sheegay in aanay bixin karin lacagaha lagu ganaaxay.